Ụkwụ izu ike maka n'okpuru oche / Ergonomic High-ọkwa ebe nchekwa ụfụfụ n'okpuru oche na-edozi ịdị elu ụkwụ ụkwụ Rocker / Massage Textured Office Desk Foot Pillow Pad /Na-ebelata azụ na Ụkwụ mgbu
· Ọrụ: oche oche oche nwere ike inye nkwado nkwado maka ụkwụ ma belata nrụgide na ụkwụ n'okpuru ụkwụ.Ihe mkpuchi udiri ịhịa aka n'ahụ suede dị nro nke mpempe ụkwụ ụkwụ nwere udidi ịhịa aka n'ahụ siri ike, nke nwere ike ịkwalite mgbasa ọbara, belata nrụgide ikpere na ike ọgwụgwụ ahụ, ma belata mgbu ụkwụ na ụkwụ.Ị nwere ike tinye ebe mgbaba ụkwụ n'okpuru tebụl ka ọ rụọ ọrụ.
· Nhazi nhazi: Ogo nke ụkwụ ụkwụ bụ 17 * 11 * 6 sentimita (ihe dịka 43.2 * 27.9 * 15.2 cm), na ịdị elu ya nwere ike gbanwee dịka nkasi obi gị si dị.A na-eji ụfụfụ ebe nchekwa dị elu mee ihe mgbakwasị ụkwụ ụlọ ọrụ anyị.Ejiri ụfụfụ nrụgide mee ebe mgbakwasị ụkwụ ergonomic iji nye nkwado siri ike maka ụkwụ na ụkwụ gị.
· Ihe na-adịghị mma: Enwere silicone na-adịghị amị amị na ala nke mpe mpe akwa, na ụkwụ na-ezu ike n'okpuru oche agaghị agagharị. Iji teta ụkwụ gị, naanị ị ga-atụgharị ụkwụ ụkwụ gị ka ọ teta.Nkwụsị ụkwụ a na-emegharị emegharị ga-abụ ngwa dị mma maka oche egwuregwu, sofas, oche oche, na oche ọrụ.Ihe mgbakwasị ụkwụ dị nro ma dị mfe iburu, na-enyere gị aka inweta nsonaazụ kacha mma n'oge njem dị anya.
Ndụmọdụ dọkịta orthopedic: Ime n'ụkwụ ergonomic n'okpuru tebụl nwere ike inyere gị aka idozi ọnọdụ ọdụ gị.Jiri n'okpuru ebe mgbakwasị ụkwụ desktọpụ iji belata nrụgide dị n'azụ na ubu.oche oche stool ga-enwe mmetụta dị mma na ahụike gị.
Afọ ojuju 100%: 2021 kwalitere ụkwụ bụ ezigbo onye mmekọ maka ndị di na nwunye na-arụkarị ọrụ.Ị ga-eme ka ọkpụkpụ azụ gị kwekọọ nke ọma, belata nrụgide n'úkwù na ubu gị, ma nwee mmetụta dị mma na ahụike gị na ịrụ ọrụ nke ọma.Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịdị mma nke footrest, anyị na-ekwe nkwa ịnye gị nzaghachi ngwa ngwa na ngwọta zuru oke.
Nke gara aga: Ụkwụ izu ike maka N'okpuru oche, Ụkwụ Stool maka oche na-arụ ọrụ, Ergonomic Nkwado Nkasi Obi Ụfụ Ụfụ Cushion with Hand, Footrest Rocker Pillow maka Ụlọ, Ụlọ ọrụ, Ụgbọ ala, Ụgbọelu na-ebelata Lumbar, azụ, mgbu ikpere.
Osote: Nbunye ODM China akwa akwa akwa azụ